नेप्से परिसूचक २‍‍.२९ प्रतिशतले बढेपछि १४२ कम्पनीले कमाए् - Everest Dainik - News from Nepal
नेप्से परिसूचक २‍‍.२९ प्रतिशतले बढेपछि १४२ कम्पनीले कमाए्
काठमाडौं । बुधवार नेप्से परिसूचक २ दशमलव २९ प्रतिशत बढेर बन्द भएको छ ।
कारोबार शुरु भएदेखि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको वेबसाइट कारोबार बन्द हुँदासम्म पनि चलेको छैन ।
त्यसको विकल्पमा नेप्सेले अर्को लिङ्क खोलेर कारोबार हेर्न सक्ने बनाएको छ । दिनभरी बढेको बजार अन्त्यमा २७ दशमलव ४५ अंक बढेर १ हजार २ सय २६ दशमलव ४५ विन्दुमा पुगेको छ ।
कारोबार भएका १० समूहको परिसूचक बढेपछि नेप्से परिसूचक बढेको हो । लघुवित्त समूहको परिसूचक ४ दशमलव ८१ प्रतिशतले बढेको छ ।
याे पनि पढ्नुस १ बजेको अपडेटः दुई घण्टामा फेरि बढ्यो नेप्से कारोबार
यस दिन सात लघुवित्त कम्पनीहरुको शेयर मूल्य ७ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म बढेको छ । कालिका माइक्रो क्रेडिट डेभलपमेण्टको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ भने एनएमबि माइक्रोफाइनान्सको शेयर मूल्य ९ दशमलव ५९ प्रतिशतले बढेको छ ।
बीमा, होटल, विकास बैंक र जलविद्युत समूहको परिसूचक २ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । व्यापार समूहको परिसूचक स्थिर रहेको छ । नविल बैङ्क लिमिटेडको प्रतिकित्ता रू. ९ सय ६५ मा रू.१ करोड ६२ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कारोबार भएका १ सय ६२ कम्पनीको ४ हजार ६ सय २३ पटकको व्यापारमा ९ लाख २ हजार ७ सय ५० कित्ता शेयरको रू.३३ करोड ६४ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
कारोबार भएका १ सय ६२ कम्पनीमा १ सय ४२ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ९ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । १२ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ ।
नेप्से परिसूचक १.२४ प्रतिशत बढ्यो (२ बजेको)
काठमाडौं । बुधवार कारोबार भएको तेस्रो घण्टामा नेप्से परिसूचक १ दशमलव २४ प्रतिशत बढेको छ । १४ दशमलव ८२ अङ्क बढेर नेप्से १ हजार २ सय १३ दशमलव ८२ विन्दुमा पुगेको छ ।
कारोबार भएका ९ समूहको परिसूचक बढेपछि नेप्से परिसूचक बढेको हो । लघुवित्त समूहको परिसूचक २ दशमलव १६ प्रतिशतले बढेको छभने पाँच समूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । कारोबार भएका १ सय ४९ कम्पनीको रू. १६ करोड १७ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको सर्वाधिक रू। ८६ लाख ६० हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।